masina maria tany lourdes
Hatolotra... ny Zanak'olona
Talata 25 febroary 2020 — Herinandro fahafito mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 9, 30-37 — Niantso antsika tamin'ny alalan'ny Evanjely Andriamanitra mba hahazoantsika ny voninahitr'i Jesoa Tompontsika.
Mba ho vanona
Eto izao ianao :
Salezianina toy inona ?
Ny 16 ka hatramin’ny 04 avril 2020 no ho tanterahina any Turin-Valdocco ny “Chapitre générale faha-28” (CG28) ho an’ny Fikambanana salezianina. Hafatra roa lehibe no ampitain’izao fivoriam-be izao : ny fiverenana any Valdocco, trano foiben’ny salezianina, taorian’ny 62 taona lasa, ka ny CG18 no natao farany tany, ary ny fivoriam-be handinihina ny hoe “salezianina toy inona no ilain’ny tanora ankehitriny?”
Masindahy Versiglia sy Caravario (Kintan'ny finoana) 25/02/2020 06:30
Hatolotra... ny Zanak'olona (Tenin'ny Tompo) 25/02/2020 05:30
Masindahy Modeste de Trèves (Kintan'ny finoana) 24/02/2020 06:30
Mino aho, Tompoko... (Tenin'ny Tompo) 24/02/2020 05:30
Ny tsy fahazakana tsy fahombiazana (Ampela mihary) 24/02/2020 05:00
Ambony ambany  (Tantara) 23/02/2020 13:00
Masindahy Polycarpe de Smyrne (Kintan'ny finoana) 23/02/2020 06:30
Tiavo ny fahavalonareo (Tenin'ny Tompo) 23/02/2020 05:30
Ambony ambany  (Tantara) 22/02/2020 13:00
Fiketrahan'i Masindahy Pierre (Kintan'ny finoana) 22/02/2020 06:30
2020-02-14 / 12:16:24 - Tany amin’ny 83km avaratra atsinanan’i Vatomandry no nisy ny foiben’ilay dépression tropicale Francisco tamin’ny 10 ora maraina teo. Mitondra rivotra 55km/ora izy ary arahina tafiotra manodidina ny 75km/ora. Mikisaka mianatsimo somary atsimo andrefana ny diany ka mahafaka 9km/ora. Vinavinaina hiditra an-tanety ao atsimon’ny distrikan’i Mahanoro izy rahampitso sabotsy ka tsy hiova firy ny heriny. Tsy misy ny filazana mikasika ny rivodoza, satria, tsy ahiana ho feno ny fepetra mikasika izany. Na izany aza, mila mitandrina tsara ny mponina voakasiky ny filazana amin’ny fahabetsahan’ny rotsak’orana. Mety arahina tafiotra mahatratra 70km/ora izany amin’ny fotoana hidirany an-tanety. Entanina tsy hiandriana ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan’i Fenoarivo atsinanana sy Manakara mandrapaha-lasan’ny loza tanteraka. Iangaviana, araka izany, ny mponina voakasika rehetra mba hanaraka tsara ny toromarika omen’ny manam-pahefana ifotony.
2020-02-12 / 17:07:56 - Voatendry ho sekretera jeneralin'ny a,ntoko TIM, nandritra ny fivoriana natao teny Bel'Air omaly talata, andriamatoa Rina Randriamasinoro izay kandida ben'ny tanana tamin'ny fifidianana kaominaly farany teo. Voatendry ho tompon'andraikitry ny seraseran'ny antoko kosa ny solombavambahoaka voafidy tany Ambatondrazaka, Fidèl Razarapiera. Tsiahivina fa efa lasa sekretera jeneralin'ny Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM ny sekretera jeneralin'ny antoko TIM teo aloha, ramatoa Olga Ramalason.
2020-02-12 / 17:01:22 - Potika zato isan-jato ny lalam-pirenena faha-33 Bis mampitohy ny kaomina ambanivohitra Ambatoboeny amin'Andranofasika, taorian'ny fisian'ny ranobe tany an-toerana. Nihaona tamin'ny ben'ny tanànan'Ambatoboeny ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy, nijery ny fomba hanarenana io lalana simba io. Mijanona any amin'ny 12km tsy hiditra an'Ambatoboeny ny fiara ankehitriny ka tsy maintsy mandeha an-tongotra ny olona. Mirefy 23km io lalana simba io saingy andoavana 50.000 ariary izany ho an'izay manana fahefa-mividy handeha moto.
2020-02-12 / 16:49:36 - Olana lehibe ankehitriny ny tsy fahaizana mifehy sy mitantana ny ranomasina manoloana ny fihanaky ny loto. Nifototra tamin'ny fitadiavam-bahaolana mifandraika amin'izany indrindra ny atrikasa namelabelarana ny tetikasa "Saphire". Tafiditra anatin'ny fifanarahan'i Nairobi momba ny fiarovana sy ny fitantanana ary ny fampiroboroboana ny tontolo an-dranomasina sy ny morontsiraka ny tetikasa. Tanjona ny fanatsarana ny rafitra efa misy etoa mintsika momba ny rohivoary an-dranomasina na ny "écosystème marin". Isan'ireo firenena 9 mahazo tombony amin'ny tetikasa Saphire i Madagasikara.
2020-02-11 / 18:48:00 - Mikarakara hetsika fizaham-pahasalamana maimaimpoana ho an'ny vehivavy, nanomboka androany 11 febroary ary haharitra iray volana, ny Centre Marie Stella Analamahitsy. Hetsika izay tafiditra amin'ny fanamarihana ny andro erantany ho an'ny marary. Antoky ny fivoaran'ny ankohonana sy ny fampandrosoana ny vehivavy saingy matetika izy ireny no manao ambanin-javatra ny fahasalamany. Izany indrindra no nahatonga ny Centre Marie Stella Analamahitsy nanao izao hetsika manokana ho an'ny vehivavy izao.
2020-02-11 / 18:11:00 - Tsy diso anjara tamin'ny fanamarihana ny andron'ny marary, araka ny nametrahan'i Papa Joany Paoly faharoa azy tamin'ny taona 1992, ny teo anivon'ny hôpitaly HJRA, androany 11 febroary. Fiombonam-bavaka niarahan'ireo Aunônerie rehetra miasa ao amin'io hôpitaly no nanehoana izany. Nisy ny vavaka sy fametrahan-tanana ny marary nataon'ny finoana hafa ary ny fanomezana ny sakramentan'ny marary kosa no nataon'ny finoana katôlika, nandritra izany. Nitohy tamin'ny fizarana fanomezana hoan'ny marary ny fotoana taorian'izay.
2020-02-11 / 17:27:11 - Feno 45 taona androany 11 febroary ny nitifirana ka nahafaty ny kôlônely Ratsimandrava Richard. Nomarihana tamin'ny lanonana ara-miaramila teny Ambohijatovo, toerana nitrangan'ny fitifirana, ny fahatsiarovana izany, ny marina teo. Nifanindran-dalana tamin'izany koa ny fahatsiarovana ireo mpitandro filaminana namoy ny ainy am-perin'asa tamin'ny taona 2019; nahitana zandary 8 sy miaramila 6 ary polisy iray.Notoloran'ny fitondram-panjakana fanomezana ny fianakavian'izy ireo. Nanotrona sy nanome voninahitra izany ny praiminisitra Ntsay Christian. Nambarany nandritra izany fa fotoana hamerenana indray ny tsirim-panantenana amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana manerana ny Nosy ny fotoam-pahatsiarovana ny mpitandro filaminana namoy ny ainy am-perin'asa.
2020-02-07 / 16:57:51 - Nomarihana androany tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo teny Ambohitsirohitra, tao anatin'ny lanonana tsotra notarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny fahatsiarovana ireo namoy ny ainy tamin'ny 7 febroary 2009. Tsy ho adinoina mandrakizay, hoy ny filoha, ny ràn'ireo namoy ny ainy miisa 48 sy ireo naratra an-jatony tamin'io fotoana io. Manana adidy amin'izy ireo isika, hoy hatrany ny filoha, dia ny fiaraha-mientana amin'ny fampandrodoana an'i Madagasikara. Nitohy tamin'ny fambolen-kazo teny Ambohimanga ny fotoana ho an'ireo mpikambana amin'ny AV7.
2020-02-06 / 17:09:29 - Ho tanterahina tsy ho ela ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fitsinjarana ny vatsin'ankohonana sy ny fanomezana asa avotra mirindra mba hahafahan'ny fianakaviana sahirana miisa 150.000 miaina ara-dalàna. Tafiditra anatin'ny tetikasa vatsian'ny Banky Iraisampirenena vola ao anatin'ilay "filets sociaux de sécurité", andiany faharoa izany. Isan'ny nivoitra tamin'ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 5 febroary teo ny momba izay fanohanana ny fianakaviana sahirana izay.
2020-02-06 / 16:51:44 - Miandry ny fanapahan-kevitra horaisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fangatahan'izy ireo mba hampody ny zanany mianatra any Chine ny solontenan'ny ray amandrenin'ny mpianatra malagasy any an-toerana. Manahy ny ain'ireo zanany ireto ray aman-dreny ireto manoloana ny fihanaky ny tsimokaretina coronavirus. Efa tafapetraka eny Ambohitsirohitra omaly alarobia ny taratasy misokatra nanaovan'ireto ray aman-drenin'ny mpianatra ireto ny antso avo amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Vonona ny hanaraka ny fepetra amin'ny fanarahamaso ireo mpianatra ireo ny ray aman-dreny rehefa tonga eto an-tanindrazana izy ireo.
Adino ny Famantarana ?
Adino ny Teny miafina ?
Copyright © 2020 Radio Don Bosco - Tous droits réservés